September 2018 - Page 6 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda
September 2, 2018 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo maanta oo Axad ah iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo sidoo kale ah guddoomiyaha madasha maamul goboleedyada ayaa […]
Qarax gaari oo lala beegsaday xarun degmo oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay weerar gaari oo ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho maanta oo Axadda ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan. Weerarka ayaa dhacay kadib markii qarax […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least six people were killed in a suicide car bomb attack in Mogadishu on Sunday, security sources said. The attack occurred when the car bomb exploded outside the compound of Halwadag district […]
September 1, 2018 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Guddi labo dhinac oo ka socda Soomaaliya iyo Itoobiya oo dhawaan la asaasay ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya maanta oo Sabti ah, sida ay […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Shirka madasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in 3-da September uu ka furmo magaalada Kismaayo. Madasha maamul goboleedyada ayaa waxaa ku midaysan Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hir-Shabeele. Ammaanka Kismaayo ayaa […]
Qof kamid ahaa ergada doorashada aqalka hoose oo lagu toogtay xarunta ay doorashada ka dhacayso ee magaalada Cadaado
Cadaado-(Puntland Mirror) Mid kamid ah ergada ka qaybgalaysay doorashada xildhibaanada maamulka Galmudug u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu toogtay magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaas, sida ay sheegayaan ilo-wareedyada. Toogashada oo dhacday maanta oo [...]
London-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ku dhintay isbitaal kuyaala magaalada London ee dalka UK, sida ay sheegeen qoyskiisu. Nuur Xasan Xuseen oo qiyaastii 82 jir ah, ayaa ku jiray [...]
Maamul gobleeedka Koonfur Galbeed oo la saftay xulufada Sucuudiga hoggaamiyo ee kasoo horjeeda dalka Qatar
Baydhabo-(Puntland Mirror) Maamul gobleeedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay la safteen xulufada Sucuudiga hoggaamiyo ee kasoo horjeeda dalka Qatar, sida lagu sheegay bayaan. “Go’aankii dowladda federaalka ee 6-dii June 2017, waxaa la sameeyay iyada [...]